Faritra Sava - Misy iraky ny ministera maka vola an-keriny amin'ny mpandraharaha
Mpiasam-panjakana iraky ny minisiteran’ny Varotra no voampanga fa maka vola an-keriny amin'ny mpandraharaha maromaro any amin’ny Faritra Sava.
Araka ny lalàna velona mantsy alohan’ny fotoam-piotazana lavanila dia tsy maintsy manao fanambaràna mahakasika ny tahiry ananany ny mpanondrana lavanila any ivelany. Jerena ary anaovana fanamarihana ihany koa miaraka amin’izany ireo milina fampiasa amin’ny fanamboarana ny vokatra haondrana (machine de séchage). Araka ny loharanom-baovao voaray avy any Sambava anefa dia misy fanararaotam-pahefana ataon’ireto iraky ny minisiteran’ny Varotra ireto. Maro ireo mpandraharaha mitaraina amin’ny fomba fiasan’izy ireo. « Mitaky vola aminay izy ireo ary manao fanaparam-pahefana. Ny lavanila voatahiry tamin’ny taon-dasa ihany no tokony hosavain’izy ireo fa tsy ny lavanila azonay tamin’ity taona ity, ka entina hampihorohoroana anay », hoy ny fanazavana nomen’ny mpandraharaha iray any an-toerana.
Voatazona ao amin’ny borigady
Nametraka fitoriana noho io fitakiana vola io noho izany ny mpandraharaha sasany. Araka ny fantatra dia efa voasambotra ao amin’ny Borigadin’ny Zandarimaria ao Andrangoveratra ireto iraka ireto atao fanadihadiana. Miantso ireo mpandraharaha nakan’ireto farany vola ny tompon’andraikitra ao amin’izany borigady izany. Andrasana ny mety ho tohin’ity raharaha ity. Tsara ny manamarika fa nisokatra tamin’ny fomba ofisialy, omaly, ny fotoam-piotazana lavanila any amin’ny Faritra Sava.